Afrika, 07 September 2019
Sabti 7 September 2019
Robert Mugabe oo geeriyooday
Robert Mugabe, oo dalka ku yaalla Koonfurta Afrika ee Zimbabwe xukumay 37 sano kadib dhammaadkii xukunka caddaanka laga tirada badan yahay, ayaa maanta geeriyooday.
Soomaaliya oo 1-0 kaga badisay Zimbabwe
Kooxda kubadda cagta Soomaaliya ayaa guul taariikhi ah xalay ka gaadhay ciyaar ay la galeen dalka Zimbabwe. Is-aragga hore ee ciyaarta is-reebreebka Koobka Adduunka ayaa Soomaaliya ay ku badisay 1-0.
Maxkamadda ICJ oo laba bilood dib u dhigtay dacwaddii badda
Maxkamadda Caalamiga ah ee Garsoorka ICJ ee fadhigeedu yahay magaalada The Hague ee dalka Netherland ayaa muddo laba bilood ah dib u dhigtay dhagaysiga dacwaddii badda ee u dhaxaysay Kenya iyo Soomaaliya
Ganacsato Soomaali ah oo lagu beegsaday Koonfur Afrika
Dalalka Koonfur Afrika waxaa toddobaadyadii dhowaa sare uga kacay weerarada iyo falalka lagu beegsanayo gacansatada ajnebiga ah ee kasoo jeeda Afrika.
Wiilka madaxweyne Morsi oo geeriyooday
Wiilkii ugu yaraa caruurta madaxweynihii geeriyooday ee dalka Masar, Maxamed Morsi ayaa xalay magaalada Qaahira ugu geeriyooday wadno xanuun, sida uu sheegay qareenka qoyskiisa.
Warbixin: Boobkii ka Dhacay Koonfur Afrika
Ganacsato Somaliyeed ayaa si la mid ah dadka u dhashey dalalka kale ee Africa, ayagana ku hanti beelay dalka Koonfur Africa oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay rabshadaha jira awgood lagu bartilmaameedsadey